Haddii aad leedahay degel oo aad waligaa fiiriso taraafikada taraafikada bogaggaaga ugu aragtida badan, waxaad ogaan doontaa in badankood ay leeyihiin gaadiid badan muddo dheer kadib markii aad daabacday. Si sax ah uma garan kartid sababta ay boosta gaarka ahi u caan baxday. Waxaa laga yaabaa in si cajiib ah loo qoray ama laga yaabo in si fiican loogu soo dhoweeyay dhammaan baraha bulshada maxaa yeelay waxay ahayd wax lagu qoslo ama uu qoro qof leh kalsooni badan bulshada.
Si kastaba ha noqotee, abuuritaanka joornaalada caanka ah waa hal qayb oo kaliya oo abuuraya faa iido fara badan. Sida cad, boostada ama maqaalka ama fiidiyowga su’aashu waxay leeyihiin vax gaar ah kaas oo ah waxa ka dhigaya mid caan ku ah meesha ugu horeysa. Sidaa awgeed, sababta aadan og lahayn pabbi badan oo booqda boggaaga internetka waxaad ka arki mapa waxyaabaha ugu muhiimsan ee la eego?
1. Raadi fiilada, ka shaqee oo ka soo qaad cutubka WP. Ama waxaad soo dejisan mapa plugin sidii faylka zip ah oo aad ku dhex mariso macaamil FTP ah oo aad taqaanid ka dibna furfuran. (Notaðu WordPress / wp-innihald / viðbætur.)
2. Borotokoolka ayaa loo dejiyay inuu isla markiiba ka baxo baateriga. Ef þú vilt fá aðgang að búnaðinum þínum, þá geturðu líka notað Muuqaalada. Waxaad ku frá kartaa midastaða oo ka mid ah aag walboowida u leh mawduucaaga.
3. Laga soo bilaabo búnaðurinn er ekki til staðar en þú getur fengið aðgang að innleggi í sömu röð og í hverju tilfelli fyrir þig. Waxaad dooran mapa inaad tusto faahfaahinta sida maqnaashaha, taariikhda daabacaadda og qoraaga. Waxaad ku frá kartaa sawirrada yar-yar iyo xaddiga cabbirrada tirooyinka yar yar ee la yiraahdo. Caadi ahaan dadku waxay doortaan inay ku jiraan qoraallo, laakiin haddii aad rabto, waa inaad ku frá mapa boggaga ogyo lifaaqyada.
Laga soo bilaabo bogga goobaha tappi, tappi wuxuu bixiyaa vax badan oo ku saabsan habka dabacsanaanta ogyo habeynta. Waxaad soo bandhigi kartid innlegg caan ah laga soo bilaabo maalinta la soo dhaafay, ama tiro maalmo ah. Xitaa waxaad xitaa u dhigan mapa dhowr saacadood, haddii website-kaaga uu soo saaro nuxur xawaare ah. Waxaad dooran mapa in aad eegto astaamaha laga bilaabo markii ugu horeysay ee lagu daabaco boggaaga.
Þú getur notað HTML-skjöl og farshaxanka til að fá aðgang að dyrum. Ef þú ert stutt í vaxkökuna á rúminu, þá geturðu fengið þér vaxandi vax og vaxið frá CSS eins og þú getur notað WP.
Þú vilt WP-PostViews
Laga soo qaatay ‘Politico’ – Websaydh fréttir – Þú getur notað Sheekooyinka caanka ah ee ku taxan dhanka midig.